အက်ပဲလ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လက်ထဲက Obi Worldphone ဖုန်း ၂ လုံး Androidsis
အကယ်. ဒီတစ်ပတ် WileyFox ရောက်ရှိလာခဲ့သည် CyanogenMod ကိုသူတို့၏ဆော့ဝဲလ်အဖြစ်အသုံးပြုမည့်စမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်သောထုတ်လုပ်သူအသစ်အနေဖြင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Android မြင်ကွင်းနှင့်အတူ Android မြင်ကွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့်အခြားတစ်ခုကိုကြိုဆိုနိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းဟောင်း၏အကြံဥာဏ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များဂျွန် Sculley ။
ဤရောက်ရှိမှုသည် Apple ၏စတော့ဈေးကွက်တွင်ကျဆင်းခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သို့သော် Obi Worldphone နှင့်ထုတ်လုပ်သူအသစ်အတွက်အသုံးပြုသောအမည်မှာအထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ Sculley သည် Apple ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ် ဦး အဖြစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးယခုတွင်မျက်ခုံးများအကြားပစ်မှတ်ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည် ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များတွင် Android terminal ကို။ ပထမ ဦး စွာ SF1 နှင့် SJ1.5 နှစ်ခုလုံးသည်ဒီဇိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများပါ ၀ င်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးအနည်းငယ်အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
1 Apple CEO ဟောင်းမှ Android Terminal နှစ်ခု
1.1 SJ1.5 သတ်မှတ်ချက်စာရင်း
2 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ SF1
Apple CEO ဟောင်းမှ Android Terminal နှစ်ခု
Apple ကသွားတယ် စကားလုံးအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ် ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြိုးပမ်းမှုဟာ Android စမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးလောက်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်နေပြီ၊ ဒီဖုန်းနှစ်လုံးကဘာတွေယူလာမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မဖော်ပြခင်မှာမသွားဖို့ခက်တယ်။
နှစ်လယ်ပိုင်းအကွာအဝေး, တစ်ခုမှာ SF1 နှင့် SJ1.5 ဟုခေါ်သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအခြေစိုက်စတူဒီယို Ammunition မှ Apple တီထွင်မှုအရာရှိချုပ် Robert Brunner တည်ထောင်ခဲ့သော SJXNUMX ဖြစ်သည်။ ဒီစမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုစကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးပုံသွင်းရပါတယ်။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Apple အသင်းဝင်ဟောင်းများကလောင်းကြေးနှစ်ခု SF199 များအတွက် $ 1 နှင့် SJ129 များအတွက် $ 1.5 ။ သတ်မှတ်ချက်များသို့မသွားမီ hardware တွင်အသုံးပြုသောဒြပ်စင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Qualcomm သို့မဟုတ် Sony ကဲ့သို့သောအာရုံခံကိရိယာများမှလာသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
မျက်နှာပြင် - ၅ လက်မ 5p resolution Corning Gorilla Glass 720
Mediatek MT6580 quad core chip သည် 1,3 GHz နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
သိုလှောင်မှုပမာဏ 16 GB သိုလှောင်နိုင်သော micro SD ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်
နောက်ဘက်ကင်မရာ 8 MP
Dual SIM၊ 3G နှင့် A-GPS ဆက်သွယ်မှုများ
အရွယ်အစား: 146 x 73 x ကို 7,95 မီလီမီတာ
သင်မှတ်ချက်ပေးပါ polycarbonate ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏.
မျက်နှာပြင် - ၅ လက်မ Full HD Corning Gorilla Glass 5
Chip: Qualcomm Snapdragon MSM89389 615 octa core 1,5 GHz
RAM ၏ 2/3 GB ကို
Internal Storage: ၁၆/၃၂ GB micro SD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
Dual SIM, 4G, A-GPS နှင့် GLONASS ဆက်သွယ်မှုများ
အန်းဒရွိုက် 5.0.2 Lollipop
အရွယ်အစား: 146 x 74 x ကို 8 မီလီမီတာ
သတ္တု finish နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းနှင့်surelyကန်အမှန်အရာ တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြီ အမျိုးမျိုးသောအချက်များအားဖြင့်။ ငါတို့ပြောခဲ့ဖူးတဲ့တစ်ခုကသူတို့ဟာ Apple မှာရှိခဲ့တဲ့အသင်း ၀ င်တွေဆီကပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်ထားသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
နှစ် ဦး စတိုင်စမတ်ဖုန်း သူတို့ရောက်ရှိလာသောစျေးနှုန်းနှင့်အာရှ၊ အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသို့တိုက်ရိုက်သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ထိုဒေသများ၌ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက Android ကိုတဖြည်းဖြည်း ၀ င်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဤ startup မှလောင်းကြေးအသစ်များမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ Xiaomi (ရှောင်မီ) ၏အရှေ့ဘက်မှလမ်းကိုလိုက်လျှင် startup တစ်ခုသည်အနောက်တိုင်းမှဖြစ်သည်။ ဒါဟာစျေးကွက်အတွက်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Obi Worldphone သည် Apple CEO ဖြစ်သူ John Culley ၏အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း ၂ ခုကိုတင်ဆက်သည်
Jose joaquin rivera ဟုသူကပြောသည်
Jose Joaquin Rivera အားပြန်ပြောပါ
Moto 360 2015 ကိုပုံများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်